Home News Safarka Madxweynaha Farmajo Sabab, Ujeeddo iyo Maxsuul Midba?
Safarka Madxweynaha Farmajo Sabab, Ujeeddo iyo Maxsuul Midba?
Waxaan in muddo ahba la soconnay siyaasad-xumida dawladdaan uu hogaamiyo madaxweyne Farmajo iyo sii adkaanta xirfadaha siyaasadeed ee gobolka. Ismaandhaafka gayiga ka jira oo kala sarreeyaa waxaan nahay dalka ugu nugul oo si fudud wax waliba ay u saameynayaan haddaan la helin hogaamiye lagu kalsoon yahay, isgana soo xusha koox aqoon iyo khibrad u leh hawsha ay qabanayaan oo wax ka qaban kara samatabixinta dalkaan sii quusaya.
Markii ay isku dhaceen waddamada khaliijka annaga waxaan si khald ah u raacnay waddo ay xataa ka soo noqoshadeeda dhib noo keeynso sida aan hoos ku arki doonno, taasoo ah inaan raacnay dalka Qater oo ay ka soo horjeesteen hogaamiyayaasha kale ee khalijka marka Kuweyt iyo Saldanada Cuman laga reebo kadib markii lagu eedeyey inay taageerto urrurada argagixisada sida Shabaab.
MW Farmajo waxaa loo sheegay in Imaaraadka ay dano badan naga dhaxeeyaan oo waiba aan annaga uga badan nahay tan ay noo qabaan xelligaan waayo waxaa soo mara dhammaan ganacsigeenna, Xawaaladaheena iyo Somali dhowr ah oo ganacsiyo ku yeeshay markii naloo diiday dalkasta oo dunida ah.
Imaaraad waxay haddaba inoo soo Dalalka Masar, Sacuudiga iyo Itoobiiya oo uu R/Wasaaraheda cusub Xamar u yimid inuu farriin degdeg ah Farmajo u keeno, isagana uu tiisa ku darsaday isla mrakaana ku helay bilyan oo doller oo ay UAE ku siisay hawshiisa.
Haddaba maxaa dhacay oo waxaas hawlo dimlomasiyaded ah wax uun uga suugali waayeen?.Waa hal sabab oo kaliya Madaxweynaha oo go’aanka uu soo qaataa oo dalka iyo Dadka u wanaagsan marka uu ula tago Qater iyo wakiilladeeda Fahad iyo Shoolle waa laga tuuraa. Waana waxa dhibaatada dalka maanta ku hayaa Madaxweyne aan go’aan iyo ballan lahayn. Abiy Ahmed ayaa ugu dambeyey oo ku hungoobay heshiiskii uu la galay ee ahaa in 4 dekadood la siiyo Itoobiya iyo Xuduudahana la furo. Waayo waxaa lagu khasbay MW Farmajo inuu warqad ka daba qoro Abiy oo uu kaga baxayo wixii ay isku ogaayeen bal marka hore ka talageliyo dadka aqoonta u leh arriimaha siyaasadda ee ahayn Balal, Jamaal, siyaad iyo Caabsiciid oo dhamaantood dhalliyaro qabiili ah, isgana ay haybta guud ee uu kursiga kula fadhiyaa ku weheliyaan ayaa odayga ku leh waxaan kaa dhigeynaa Maxamed Siyaad oo kale.
Masar iyo Sacuudiga waxaa uu ballamo uga baxay min seddex jeer, Imaaradka laba jeer iyo hadda oo uu Itoobiya uga baxay. Marka la isku duubo waxaa uu madaxweynaha ballan dalka uu mgaciisa ku galay ka baxay 9 jeer. Waana sababta keentay in Abiy uu xataa gacanta ka taagay oo uu yiri anigaba ballamadii waa iiga baxay oo ninkaas la iguma oga, mana yaqaanno meel uu u socdo.
Imaraadku maxay Gobolka ka raabaan?:
Imaaraada waxay gobolkan ka rabaan inay gacansiga gayiga maraa ay iyagu hor boodaan, maadaama uu saameyn weyn kuyeelanayao dhaqaalaha ay dekadooda Jabal Cali ka hesho marrinbiyoodkan. Waxaa hadda kula tartamaya Shiinaha iyo Turkiga oo ay Qater u sacbineyso, waxayna Imaaraadka rabaan in laga saaro labadoodaba geeska Afrika iyo dekadahaba. Somaliya waxay ku taallaa goob muhiim u ah dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka waxay leedahay dekado badan oo wax badan laga sameynkaro waana saababta ay Imaaraadka u daba joogaan Somaliya inay heshiis la galaan.
Maxaa ka fa’iido ah Booqashada Farmajo ee Eretria?.
Mar haddii Masar naga quusatay, oo Sacuudiga naga quustay oo hadda uu Abiy Axmed naga quustay waxaa kaliya ee haray waa Isaias Afawerki oo yiri Somalida anigaa aqaan oo waxay igu leeyihiin abaal. Waxaan si fiican u aqaan rag badan oo ka tirsanaa dawladdii Maxamed Siyaad iyo kuwa aay Farmajahan isku hayb yihiin oo aan soo jaadnay ee bal markaa ha laiigu simo. Waxaan kaloo ku kaalmeyey markii ay rabeen inay dawladooda iska dumiyaan oo Shababka iyo Maaxaakiimta ku hubeeyey. Afarwerki waxaa muuqata inuu wali isu haysto inuu la hawlgalayo kooxdii loo bixyey isbahaysaiga dib u xoreynta ee Asmara, kuna dhamaada taageerada Alshabaab oo wali si weyn loogu xanto isaga iyo Qater.
Haddaba maxaa dhici kara? Waa laba bidood :
Inuu Faarmajo soo ogolaado waxa loogu yeeray oo uu soo saxeexo waxa ay UAE rabto oo ah inuu soo wareejiyo dekadaha Somaliya, si looga ilaaliyo in heshiis lagula galo waddamo awood leh sida Turkiga iyo Shiinaha. Hasa yeehsee waxaa cajiib ah waxaa hada safarka lagu daray oo Airporka Muqdisho halaleel uga raacay ninkii loola noqon jiray heshiisyada ee cagta ku dhufan jiray Fahad Xaaji Yasiin. Haddaba Malaga yaabaa inaan markaan laga noqon waxa la soo galo. Aragaane. Booqashadaan xataa Farmajo lagama talogelin ee waa loo yeeray waxaana la siiyey 48 saacadood inu Asmara ku tago, waxaanu codsaday inay ahaato qarsood hasa yeehsee saxaafadda Eretria ayaa shaacisay.
Inuu soo diido oo uusan waxba soo saxeexin, tan oo keeni doonta in mar kale la galo xaalad adag iyo Imaaraadka oo cadeysa inay rabaan in Farmaajo meesha laga qaado.
Hadaba maxaa ka dhalan kara labadaan middii uu duqa reerka noo soo dooraa? a)Tan kowaad waxaa ka dhalan kara in Somaliya ay gacanta u gasho UAE, Itoobiya iyo Eretria oo wada jira,dhamaan dekadaheeniinna la qaato. Waxaana taas taba taalla inay Qater iyo ciddii ay waheshataaba ay shabaab oodda nooga soo qaddaan oo dagaallo xun iyo xasiloonidarri la yaqaanno ay dalka ka dhacdo. b) Haddii uu soo diido waxaa Iyana nala dagaallami doona Khaliijka oo UAE ay garwadeen u tahay , Itoobiya oo Eretria gacanta haysataa, waxaana dagaalka uu ku fidi doonaa Jmahuuriyadda Jibuuti, haddii madaxdeedu caqli kan farmajo dhaammaa aysan la iman.
Imaaraadka waxaa ka go’an inay gobolka gacanta ku dhigaan sida uu London ka sheegay Wasiru-dawlahooda Anwar Gargash oo `yiri UAE waxay u diyaar tahay iny cadwogeeda ka hortagto oo aysan reer Galbeedkaa isku hallayn. Mar wax laga weydiiyey arranta Somaliya waxaa uu ku jwaabaay “Waxaa jira daddaallo isku daya hadda na laku dhexdinayo annaga iyo Somalia, waxaan isku dayeynaa inaan howasheenna sii wadanno, laakiin waan caddeynay in naloo kugu gafay sidii naloola dhaqmay shixnaddii lacagtii sagaalka milyan iyo dheeraadka ahayd …waxana rabnaa cudur daar”halkaan ka akhriso hadalka Gargash oo ku soo baxay khaleej times ee UAE.
Previous articleWarbixin:Booqashadda Farmaajo Ee Elataria oo Quus-gelisay Shacabka Soomaaliyeed(Dhageyso)
Next articleMahad Maxamed Guulleed oo sheegay in lagu dhawaaqaayo Xisbi Siyaasadeed lagusoo Unkay Villa Soomaaliya(Waqtigii Ololaha Doorashooyinka Miyaa La gaaray??)
Yaa ka dambeeyay iibinta kawaanka kalluunka ee Liido Gudoomiye Yariisoow oo...